Soosaarayaasha galoofisyada Nitrile, galoofyada nitrile gacmeedyada, galoofyada nitrile ee gaarka loo leeyahay - Gacan Fine
Shirkadda "Fine glove company" oo ku takhasustay soo saarista iyo dhoofinta galoofyada nitrile ee la tuuri karo si loogu baaro caafimaadka loona isticmaalo ujeedo badan. waxaan aqoon u leenahay labada qaybood ee soo saarida qalabka caafimaadka I&II, oo leh koox khibrad sare u leh wax soo saarka iyo Xakamaynta Tayada. Alaab kasta oo badan ayaa si adag loo kormeeri doonaa ka hor intaan la keenin si loo hubiyo in tayada had iyo jeer ay fiicantahay sida loo codsaday.
Hayso wax soo saar aad u fiican iyo koox tayo sare leh oo tayo leh
U qalma ISO13485 (Nidaamka maaraynta tayada qalabka caafimaadka), BSCI (hanti dhowrka u hogaansanaanta bulshada)
Waxaan aqoon u leenahay labada qaybood ee soo saarida qalabka caafimaadka I&II
112021 / Maajo
Warshadaha Gacan-gashi ee Rubber ee Malaysia: Kuwa Fiican, Kuwa Xun Iyo Kuwa Xun - Falanqaynta
Warshadaha Gacan-gashi ee Rubber-ka Maleesiya: Wanaagga, Xun iyo Foolxumada - Falanqaynta Waxaa sameeyay Francis E. Hutchinson iyo Pritish Bhattacharya COVID-19 safka faafa iyo Amarka Xakamaynta Dhaqdhaqaaqa (MCO) ee socda waxay dhirbaaxo kulul ku dhufteen Malaysia ...
Malaysia waxay sameysaa 3 ka mid ah 4-tii galoofyada caafimaadka ee adduunka. Warshaduhu waxay ka shaqeeyaan ha ...
Malaysia waxay sameysaa 3 ka mid ah 4 of galoofyada caafimaadka ee adduunka. Warshaduhu waxay ka hawlgalaan awood badhkeed wershadaha gacmo gashi ee Malaysia, oo sameeya inta badan badbaadada gacanta muhiimka ah ee adduunka, waxay ku shaqeeyaan awood badhkeed markay ...